Mezcal : Fahaterahana Vaovao Indray Ho an’ilay Zava-Pisotro Nentim-paharazana Meksikàna · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra J. Tadeo Nandika (en) i Melissa Wise, Agnieszka Szymanski, nirinandrea
Voadika ny 17 Desambra 2017 2:24 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Français, Español
Lasa lamaody mihitsy ny fisotroana mezcal tato anatin'ny folo taona farany, fa inona marina moa ilay mezcal ? Araka ny nambaran'ny Official Mexican Standard (manampahefàna ofisialy miandraikitra ny famaritana sy toetoetry ny mezcal) zava-pisotro misy alikaola mangarahara, azo avy amin'ny zavamaniry iray : maguey na taretra Amerikana.
Tsy hay marina izay fiaviana ara-tantaran'ny mezcal, na maro aza ireo manohana ny filazana sasany manao hoe teraka tamin'ny andron'ny fanjanahantany, izy io, fotoana vitsy taorian'ny fanjanahan'ny Espaniola tamin'ny 1521 sy ny fampidiran-dry zareo ireo teknika fitsihifana. Misy ny milaza fa zava-pisotro talohan'ny vanimpotoana espaniola nampiasain'ireo teratany nandritry ny taonjato nialohan'ny fanjanahantany ilay izy..
Laharana voalohany no toerana misy ny mezcal ankehitriny, anivon'ireo zava-pisotro hafa ela nihetezana toy ny pulque sy tepache. Aoka tsy ho afangarontsika amin'ny tequilla izy, izay avy amin'ny taretra manga notazana teny amin'ny faritra tena ahitàna ny Tequila izy io, ao amin'ny fanjakan'i Jalisco. Manasongadina tsy fitoviana hafa vitsivitsy ny lahatsoratra iray vao nivoaka tsy ela tao amin'ny Huffington Post mikasika ny fiakaran'ny Mezcal .
Ambony be ny tinady ho an'ny mezcalerías hany ka niha niely be ny mezcalerías (toerana natokana ho an'ny fivarotana sy fisotroana azy io ihany). Vohikala maro tahaka ny Hello DF na ny TimeOut no manoro matetika ireo fivarotana mezcal be mpandeha indrindra.
Misy karazany maro io zava-pisotro io. Ny tena miparitaka dia ny fotsy, ilay antitra, ary ny pechuga, izay notsihifina niaraka tamin'ny nofon'akoho. Amiko manokana, ilay misy tsiro maimay no ankafiziko. Raha ilay tsy misy fangarony no safidianao, tokony ampiarahinao amin'ny silaka voasary izany, sira sy tarettra ary vovoka sakay. Toy ny hafahafa , sa ahoana ? Saingy matsiro.
Mampiseho fomba efatra hanamaivamaivanana ny mezcal ny vohikala Mezcal Nation :
Nanome ny fandinihana avy aminy manokana ihany koa momba ny fisotroana mezcal ny vohikala Animal Gourmet :
Nandika (fr) i Agnieszka Szymanski